2 Ndị Eze 14 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
2 Ndị Eze 14:1-29
14 N’afọ nke abụọ nke ọchịchị Jehoash+ nwa Jehoahaz bụ́ eze Izrel, Amazaya+ nwa Jehoash bụ́ eze Juda ghọrọ eze. 2 Ọ gbara afọ iri abụọ na ise mgbe ọ malitere ịchị, ọ chịkwara afọ iri abụọ na itoolu na Jeruselem. Aha nne ya bụ Jehoadin+ onye Jeruselem. 3 O wee na-eme ihe ziri ezi n’anya Jehova,+ ọ bụ naanị na ọ bụghị dị ka Devid nna nna ya.+ O mere dị ka ihe niile Jehoash nna ya mere si dị.+ 4 Ọ bụ naanị na e bibighị ebe ndị dị elu.+ Ndị mmadụ ka nọ na-achụ àjà ma na-esure ihe nsure ọkụ n’ebe ndị dị elu.+ 5 O wee ruo na ozugbo alaeze ahụ siri ike n’aka ya, ọ malitere igbu+ ndị na-ejere ya ozi, bụ́ ndị gburu eze bụ́ nna ya.+ 6 O gbughịkwa ụmụ ndị ahụ gburu ya, dị ka e dere n’akwụkwọ iwu Mozis, nke Jehova nyere n’iwu, sị:+ “A gaghị egbu ndị bụ́ nna n’ihi ụmụ ha, a gaghịkwa egbu ụmụ n’ihi nna ha; kama a ga-egbu onye nke ọ bụla n’ihi mmehie nke ya.”+ 7 Ọ bụ ya gburu ndị Idọm+ na Ndagwurugwu Nnu,+ ya bụ, puku ndị ikom iri, o wee weghara Sila n’agha, e wee na-akpọ ya Jọktiel ruo taa. 8 Ọ bụ mgbe ahụ ka Amazaya zipụrụ ndị ozi ka ha gakwuru Jehoash nwa Jehoahaz, bụ́ nwa Jihu eze Izrel, sị ya: “Bịa. Ka mụ na gị lụọ agha.”+ 9 Jehoash eze Izrel wee zigara Amazaya eze Juda ozi, sị: “Ahịhịa ogwu nke dị na Lebanọn zigaara osisi sida+ nke dị na Lebanọn ozi, sị, ‘Kpọnye nwa m nwoke ada gị ka ọ bụrụ nwunye ya.’ Otú ọ dị, anụ ọhịa nke nọ na Lebanọn gafeere ma zọda ahịhịa ogwu ahụ.+ 10 N’ezie, i meriwo+ Idọm, obi gị afuliwokwa gị elu.+ Ùgwù gị dịrị gị,+ birikwa n’ụlọ gị. Gịnị mere ị ga-eji lụọ ọgụ+ mgbe ị nọ n’ọnọdụ ọjọọ,+ o wee bụrụ na ị ga-ada, gị na Juda?” 11 Ma Amazaya egeghị ntị.+ Jehoash eze Izrel wee gbagote, ya na Amazaya eze Juda wee lụọ agha+ na Bet-shimesh+ nke Juda. 12 Izrel wee merie Juda,+ onye ọ bụla n’ime ha wee gbalaa n’ụlọikwuu ya. 13 Ọ bụ Amazaya eze Juda bụ́ nwa Jehoash nwa Ehazaya ka Jehoash eze Izrel jidere na Bet-shimesh. E mesịa, ha bịara na Jeruselem, o wee kwatuo mgbidi Jeruselem, malite n’Ọnụ Ụzọ Ámá Ifrem+ ruo n’Ọnụ Ụzọ Ámá Nkuku,+ bụ́ ebe dị narị kubit anọ. 14 O wee bukọrọ ọlaedo na ọlaọcha niile na arịa niile dị n’ụlọ Jehova+ nakwa n’ebe a na-edebe akụ̀ n’ụlọ eze, kpọrọkwa ndị e jidere n’agha wee laghachi Sameria. 15 Ma ihe ndị ọzọ metụtara Jehoash, ihe ndị o mere na ike ọ kpara na otú o si buso Amazaya eze Juda agha, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Izrel? 16 N’ikpeazụ, Jehoash sooro nna nna ya hà+ dinaa, e wee lie ya na Sameria+ n’ebe e liri ndị eze Izrel, Jeroboam+ nwa ya wee malite ịchị n’ọnọdụ ya. 17 Amazaya+ nwa Jehoash eze Juda wee dịrị ndụ ruo afọ iri na ise mgbe Jehoash+ nwa Jehoahaz eze Izrel nwụsịrị.+ 18 Ma ihe ndị ọzọ metụtara Amazaya, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ+ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Juda?+ 19 N’ikpeazụ, ha jikọtara aka gbaara ya izu+ na Jeruselem, o wee gbaga Lekish;+ ma ha zipụrụ ndị mmadụ ka ha chụrụ ya gaa Lekish. Ha wee gbuo ya n’ebe ahụ.+ 20 Ha wee jiri ịnyịnya buru ya, e wee lie ya+ na Jeruselem n’ebe e liri nna nna ya hà n’Obodo Devid.+ 21 Ndị Juda niile wee kpọrọ Azaraya,+ ọ gbara afọ iri na isii+ mgbe ahụ, ha wee mee ya eze n’ọnọdụ nna ya bụ́ Amazaya.+ 22 Ọ bụ ya wuru Ilat+ ma mee ka Juda nwetaghachi ya mgbe eze sooro nna nna ya hà dinaa. 23 N’afọ nke iri na ise nke ọchịchị Amazaya nwa Jehoash eze Juda, Jeroboam+ nwa Jehoash bụ́ eze Izrel ghọrọ eze na Sameria wee chịa afọ iri anọ na otu. 24 O wee na-eme ihe jọrọ njọ n’anya Jehova. Ọ hapụghị mmehie niile nke Jeroboam nwa Nibat ji mee ka Izrel mehie.+ 25 Ọ bụ ya nwetaghachiri ókè nke ala Izrel malite n’ebe e si abanye Hemat+ ruo n’oké osimiri Araba,+ dị ka Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru, bụ́ onye kwuru okwu site n’ọnụ ohu ya bụ́ Jona+ nwa Amitaị, onye amụma si Gat-hifa.+ 26 N’ihi na Jehova hụrụ mmekpa ahụ́ dị ilu a na-emekpa Izrel.+ Ma onye na-enweghị enyemaka ma onye na-abaghị n’ihe afọdụghị, Izrel enweghịkwa onye inyeaka.+ 27 Jehova ekwewo nkwa na ya agaghị ehichapụ aha Izrel n’okpuru eluigwe.+ N’ihi ya, ọ zọpụtara+ ha site n’aka Jeroboam nwa Jehoash. 28 Ma ihe ndị ọzọ metụtara Jeroboam na ihe niile o mere na ike ọ kpara, otú o si buo agha na otú o si nwetaghachiri Juda Damaskọs+ na Hemat+ n’Izrel, ọ̀ bụ na e deghị ha n’akwụkwọ ihe ndị mere n’ụbọchị ndị eze Izrel? 29 N’ikpeazụ, Jeroboam sooro nna nna ya hà, bụ́ ndị eze Izrel, dinaa, Zekaraya+ nwa ya wee malite ịchị n’ọnọdụ ya.
2 Ndị Eze 14